Taxanaha Hal-abuurayaal ganacsi ee Africa - BBC News Somali
Taxanaha Hal-abuurayaal ganacsi ee Africa
4 Nofembar 2014
Lahaanshaha sawirka Swaady
Taxanaha cusub ee maanta bilaabanaya ee Riyada Africa, ayaa eegi doona sided hal-abuurayaasha ganacsi ee qaybo kala duwan oo Africa ah maalin kasta oo Tallaado ah. Mid walba oo ka mid ah nolol adag ayuu soo maray heerarka ganacsi ee shaqsiyaadkan. Inta uu socdo taxanahan Waxaad fursad u heli doontaa sida aad wax uga baran karto ka mirodhalinta riyadaada, sida ay ugu guulaysteen iyo sida ay ugu suurtagali karto qaar kale oo badan.
Swaady Martin-Leke waxaa magaziinka uu u magacaabay labaatanka dumarka dhalinyarada ah ugu awoodda badan ee Africa sanadkii 2012. Iyadoo u shaqaynaysay shirkadda General Electric Transportation oo ay ka ahayd agaasime gobol, waxay la timid riyo ah I ay samayso wax ka duwan howsha ay qabanaysay, oo horumarinaya khayraadka Africa, dhaqanka iyo aqoonsiga. Waa riyada in la muujiyo quruxda Africa, badalaadda fahamka dunida ee qaaradda iyo in la soo saaro astaan faakihaadka Africa ee asliga ah, dabeecadda Africa iyo dhaqankaba. Waxaa riyadaas ka dhashay YSWARA oo iibisa caleen iyo khayraad kale oo Africa oo heer sare ah.
Waxay ku nooshaha Johannesburg, ujeedka shirkadeeda, sida ay leedahay Swaady waa in “la daaha laga rogo sida Africa ku soo saari karto badeecada ugu tayada saraysa oo caalamka loo bandhigo, iyo in ay yeelato saamayn bulsho- taasoo ay ka mid tahay in shaqooyin la abuuro dhinaca dhaqaalaha gudaha.
Hadaba, waa kuwan caqabadaha ay la kulantay iyo sida ay uga gudubtay:-
* Helitaanka ogolaasho ganacsi ayaa ahayd mid aad u adag, iyadoo is diiwaangalinta xadka maalgalinta ugu yar ay aad u sarayso gudaha Koonfur Africa, taasoo xaaladda ku adkaysay. Waxay daba socotay dhowr bilood, waxaana ay ku qasbanaatay in ay ku celceliso sharaxaadda ujeeddooyinkeeda ganacsi.
* Helitaanka raasamaalka waxay ahayd mid adag oo laalaab badan, maadaama aysan jirin deyn ay heli kartay si ay howsha u bilowdo. Africa ma leh samafal maalgalineed ama wax loo yaqaan VC oo ay helaan ganacsiyada yar yar ee Africa sida dalalka horay u maray. Swaady waxaa taageero maaliyadeed ay ka heshay saaxiibadeed iyo qoyskeeda, balse waxay ku talinaysaa in qofku iskii raasamaal u kaydsado intii uu ku tiirsanaan lahaa lacag uu bank ka sugo.
* Qof dumar ah oo unkaya ganacsi ugub ah macnuhu wuxuu yahay in aan dhab laguu qaadanaynin, sidaa darteed wax walba ayaa kugu adkaanaya. Qofka dumarka ah marka hore waxay u baahan tahay in ay kalsooni leedahay, oo ay tahay kalsoonidaas ay ku qabto awoodeeda tan kaliya ee ay horay ugu socon karto.
* Si xoog leh ayay u dareentay iyadoo ku sugan Koonfur Africa in aysan dadku u diyaarsanayn maskaxiyan hal-abuur ganacsi, waxaana adkaaday in la helo dad hibo leh. Xirfadlayaasha hibada leh aad ayay qaali u yihiin, taasoo ay dheer tahay in dadku aysan diyaar u ahayn in saacado badan ay shaqeeyaan, taasoo ah tan loo baahan yahay marka ganacsigu bilow yahay. Swaady waxay ku qasbanayd in ay ahaato qof wax ka dhaadhicin karta dadka oo ku dhiirigalin karta jacaylka ay iyada lafteedu dareentay intii ay suuq-gaynaysay badeecooyinka Africa.
* Qiimaha tas-hiilaadka ganacsi ee leh gaaritaan caalami ah dhab ahaan ma aha mid qiime yar. Taa oo lagu biiriyay in South Africa ay tahay meelaha ugu qaalisan dunida ee wax loo dhofiyo ama laga dhoofiyo.
* awoodda tartan ee isku xirnaanta suuqgaynta badeecadda (vs. bariga fog) dhinaca sicirka, tayada iyo hal abuurka, ayaa ahayd caqabad aad u wayn.
* Magacxumada dhinaca wax soo saarka faakihada markii Africa lala xiriiriyo arrinta, inta badan waxay noqotaa in loo arko mid tayo liidatay, xasilooni darro iyo saboolnimo etc. Wax soo saarka faakihada ma aha wax lala xiriiriyo Africa, markaa way adag tahay in raasamaal loo helo.
Waxa Swaady Martin-Leke ay ku tiigsanayso ayaa ah – in ay noqon hal-abuurto ganacsi oo guulaysata, taasina ay u baahan tahay go’aan qaadasho iyo jacaylka caqabadaha ay ka hortagayaan. Iyo jacaylka iyo go’aanka gacansi ee qof qaadanayo oo ku ganacsiinayo in guul la gaaro.
Waxaa sheekadeeda oo faahfaahinta ka eegi kartaa BBC World iyo Focus on Africa TV iyo Radio.